Global Voices teny Malagasy » Bilaogy LGBT Iray Naato Fa Niresaka Tobin’Asa An-terivozona Tao Kiobà Nandritra Ny Taompolo 1960 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Febroary 2016 13:42 GMT 1	 · Mpanoratra Sandra Abd'Allah-Alvarez Ramírez Nandika (en) i Rachael Lynch, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Kiobà, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Sora-baventy Proyecto Arcoiris.
Nanambara tao amin'ny kaontiny Twitter ilay bilaogera Kiobàna malaza Yasmin Silvia Portales Machado tamin'ny fiandohan'ny volana Febroary fa nosivanin'ny Reflejos, tranokalam-panjakana Kiobàna mampiantrano azy, ny bilaogy Proyecto Arcoiris  (Tetikasa Avana) :
Miantsoantso aho androany noho ny sivan'ny CubaVa tamin'ny bilaogy LGBT ao Kiobà @ProyectArcoiris  😾 #hijab  @Negracubana  @camiloglt  @lrpbyzard 
Natsangana tamin'ny taona 2011 ny tetikasa ary sady nampafantatra no mitarika adihevitra momba ny fahasamihafana ara-pananahana sy resaka hafa mifandraika amin'izany. Mamaritra ny tenany ho “mahaleotena sy antikapitalista” ny Arcoiris, ny tanjony dia “miady ho an'ny zon'ny olona tsy manana fironana sy mari-panondroana ny fiarahan'ny lahy iray sy ny vavy iray.”
Tamin'ny resadresaka tamin'ny Global Voices, nanazava Portales Machado, bilaogera sady mpikatroka hoe:
Araka ny filazan'ny Vondrona Mpanaramaso CubaVa, izay miafina anarana, manitsakitsaka ny fizarana faha-6a amin'ny lalànan'ny fampiasana tranonkala ny andinin-dahatsoratra nasongadina, satria manaratsy ny Revolisiona.
Eto ambany ny andinin-dahatsoratra nasongadina nolazain'i Machado:
Hoy ny vakiny:
Manaiky aho fa tena nieli-patrana ny fankahalàna pelaka nandritra ireo taona ireo, saingy tsy natao izany hanamarinana ny famoronana ny “tobin'asa an-terivozona”, na hanilikilihana olona tsy hahazo hiditra oniversite na tsy hahazo asa noho ny fironanana ara-pananahan'izy ireo.
Dimampolo taona izay ny nananganana ny UMAP [Vondrona Miaramila Ho Fanampiana Ny Famokarana] ary tsy nisy na dia olona tompon'andraikitra iray aza nangataka ny famelan-keloky ny vahoaka. Mbola velona ireo tompon'andraikitra ambony indrindra. Ary efa filoham-pirenena ankehitriny ny olona izay minisitry ny Tafika Revolisionera tamin'izany.
Fotoana izao tokony angatahan'izy ireo famelan-keloka tamin'ity fihetsika famelezana, fanilikilihana ary fanasaziana nahatra tamin'ny pelaka an'arivony sy Kiobàna “manana fitondran-tena tsy mety” araka ny niantsoana azy ity.
Ny fizaran-dahatsoratra nitarika ny fanasivanana ny proyectoarcoiris.cubava.cu dia milaza ny tobin'ny Vondrona Miaramila ho Fanampiana Ny Famokarana (UMAP amin'ny teny Espaniola) izany nisy tao Kiobà ny taona 1965 hatramin'ny taona 1968. Lehilahy an'arivony no naiditra am-ponja teo ambanin'ny fiadidian'ireo vondrona ireo, ary iray amin'ireo fiampangana lehibe nahatonga ny fanagadrana azy ireo ny fahapelahana. Na dia ankehitriny aza, tsy niala tsiny ampahibemaso noho ireo zava-nitranga ireo ny governemanta Kiobàna.
Ny sombin-dahatsoratra voasivana dia ampahany amin'ny lahatsoratra “Con el perdón (o no) de Mariela Castro “, “izay midika hoe “Amin'ny famelan-keloka (na tsia) avy amin'i Mariela Castro”, ary nosoratan’ ilay mpikambana sady mpikatroka ao amin'ny Arcoiris, Jimmy Roque Martínez. Ao amin'ny lahatsoratra, alalinin'i i Roque Martínez ny lahatsary fanadihadiana HBO momba an'i Mariela Castro Espín, talen'ny Foibem-pirenena Kiobàna ho an'ny Fanabeazana ara-pananahana (Cenesex) sy ny zanakavavin'ny Filoha Kiobàna Raúl Castro. Ao amin'ny horonantsary, naseho tamin'ny Fetiben'ny Filma tamin'ny herintaona, dia niresaka ireo toby mbola niasa fony mbola minisitry ny Tafika Kiobàna ny rainy i Castro Espín.
Hoy i Machado:
Nahatalanjona anay ny filazana fa nakatona fanindroany ny bilaogy “Proyecto Arcoiris” noho ny fandikana ny Fizarana faha-6 amin'ny Fitsipika Fandraisana anjara. Nanantena indrindra aho fa olana ara-teknika ilay izy.
Ary notohizany hoe:
Tsy fantatro hoe nahoana no “manala baraka ny Revolisiona” izany, araka ny voalazan'ny didim-pitsarana navoaka ho anay. Ny hany fanazavana nomen'ny [ mpiasam-panjakana nandefa ny filazana sivana] dia na dia fanta-daza aza ny [nataon'ny UMAP], dia tsy azo avoaka ao amin'ny http://cubava.cu  izany.
Reflejos, izay mamaritra ny tenany ho “bilaogim-pianakaviana Kiobana,” dia manangona ireo bilaogy nosoratan'ireo manerana ny nosy ary hany tokana manome ity tolotra ity ao Kiobà. Azo jerena amin'ny anaran-tsehatra cubava.cu izy ary ny Klioban'ny Tanora mikirakira ny Solosaina sy Elektronika  (JCCE), sampan'ny Minisiteram-pirenena misahana ny Serasera no tompony. Ny tanjon'ny tranokala dia “ny iasany ho fitaratra ahafahan'ny Kiobàna miray hina amin'ny tanjona sy tombotsoa iombonana.”
Azo hidirana avy any ivelany ny Reflejos , saingy tsy azo atao ny mamorona bilaogy avy any ivelan'ny nosy, ary tsy mety koa ny mitantana azy avy any ivelan'ny firenena na dia noforonina tao Kiobà aza. Mba hihazonana bilaogy ao amin'ny Reflejos, dia tsy maintsy misy olona iray miditra ao avy ao Kiobà ary monina ao amin'ny faritanim-pirenena.
Fanampin'izany, nandefa filazana tamin'ny kaonty mailaka tsy an'i Portales Machado ny Vondrona Fanaraha-maso CubaVa izay tompon'andraikitra tamin'ny fanivanana ny Proyecto Arcoiris. Mampametra-panontaniana amin'ny politikam-piarovana ny tahirin'ny tranonkala izany fahadisoana izany:
Avy amin'ny: Fitantanana <cubava@cubava.cu> Daty: 2/2/2016 12:05
Ho an'ny: yasmin@cubarte.cult.cu
Mamerina indray ny fialan-tsiny izahay noho ny fandefasana filazana fandikan-dalàna ho an'ny tsy mpitantana mailaka. Ny seramailaka dia an'ny mpikambana iray hita ao amin'ireo mpiserasera manana tombontsoa manokana amin'ny bilaoginao. Mampanantena anareo izahay fa handray ny fepetra rehetra mba tsy hitrangan'ny toe-javatra tahaka izao intsony.
Ekipa Mpanaramason'ny Reflejos
Etsy an-daniny, tsy izao no sivana voalohany nataon'ny bilaogy Reflejos : nampiato bilaogy hafa mamoaka votoaty politika ny Ekipa Mpanara-maso, araka ny fanamarihan'i Portales Machado:
Nosivanin'ny Reflejos tamin'ny endrika Quinquenio Gris ireto manaraka ireto : “La Jugada,” “Observatorio Crítico,” “Bubusopía,” ary ankehitriny ny “Proyecto Arcoiris.” Mandritra izany rehetra izany, mamoaka lahatsoratra an'arivony izay manohitra ampahibemaso ny politikan'ny Sampana Fanabeazana sy ny Fahasalamam-bahoaka ny tontolon'ny blaogy masina, saingy tsy mampanahy ny Vondrona Mpanaramaso izany.
Araka ny filazana nataon'i Portales Machado tao amin'ny Twitter, hiverina indray ny bilaogy Proyecto Arcoíris amin'ny 13 Febroary 2016– tsy ahitana ny lahatsoratra nosivanina.
Niverina ny bilaogy @ProyectArcoiris tamin'ny 13 Febroary. Ho hitantsika hoe mandra-pahoviana
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/21/79194/
 Klioban'ny Tanora mikirakira ny Solosaina sy Elektronika: http://www.jovenclub.cu/